Ny Lahatsarin’ny Fifandonana Tao Egypta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2018 15:53 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Nederlands, Español, Magyar, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, عربي, English
Anisan'ny tatitra momba an'i Egypta ity lahatsoratra ity.
Nanomboka nanangona ny lahatsarin'ny olona manokana ny fantsona YouTube Citizentube, ary nisy ny pejy fisoratana anarana ho an'ny rehetra tao amin'ny pejin'ny YouTube mba ahafahana mahita (na mandefa antserasera) ny horonantsarin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra momba ny fihetsiketsehana, ary mampiditra izany ao amin'ny tranonkala.
Indro misy lahatsary mampiseho ny hetsika tao an-kianjan'ny Tahrir avy any ambony:
Mampiseho ny fifandonana teny an-kianja ity iray ity:
Ny finday no fitaovana hafa izay nampiasaina nandefasana mivantana tao amin'ny tranonkala, toy ny nataon'i Ahmed Naguib niaraka tamin'ny Twitter sy ny kaontiny tumblr. Nandefa sary mampiseho ireo toeram-pitsaboana natsangana ho an'ny mpanao fihetsiketsehana ihany koa izy, toy ity manaraka ity izay nahitana fitaovam-pitsaboana :
Fanafody sy fitaovam-pitsaboana avy amin'i Ahmed Naguib
Na ity manaraka ity izay mampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana mihorakoraka sy manofahofa saina amin'ny alina:
Tao amin'ny Facebook, namoaka lahatsary miampy fanazavana izay ahitantsika ireo kamiaona miaramila mandona ireo mpanoa fihetsiketsehana i Ahmad Elhag ; misy ny lahatsary lavalava kokoa ao amin'ny YouTube:
Saingy tsy ny kamiao ihany no nampiasain'ny mpitondra hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana: ity horonantsary eto ambany ity dia mampiseho ny fomba nampiasain'izy ireo ny soavaly sy ny rameva mba hanaovany ny asa ratsiny, izay tsy nampidi-doza ny olona am-polony fotsiny izay nohoseny ihany fa ireo biby ihany koa. Taorian'ny fifandonana voalohany, hitantsika ireo mpanao fihetsiketsehana miaro ireo biby navotsotry ny mpitaingina azy ireo